Sawiro;-Wafti ka socda Dalka Qatar oo kulan la qaatey Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya. | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Sawiro;-Wafti ka socda Dalka Qatar oo kulan la qaatey Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya.
Radio Galkacyo;-Wasiirka wasaarada arimaha dibada iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Axmed ciise Cawad ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabliya Wafti ballaaran oo ka socada Dowlada Qatar.
Waftigaan ayaa waxaa hogaaminaayey Safiiraka Dowlada Qatar u fadhiya Soomaaliya mudane Mudane Xasan bin Xamsa Asad Haashim,waxa uuna Wasiirka arimaha dibada ee soomaaliya soo gaarsiiyey salaan uu uga siday dhigiisa dalka Qatar ahna Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Qatar mudane Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jaasim Aala taani.
Kulanka ayaa intii uu socda waxaa looga wada hadlay arimo badan oo ay ka midiyihiin Xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeye labada dal ee walaalaha,fulinta Mahaariico horey loogu heshiiyey,iskaashiga dhaqaalaha,Amniga iyo horu marinta arimha Bulshada,sidoo kakle waxaa la isla soo hadal qaadey siyaasayada gobalka iyo arimah ku xeeran, waxaana kulanka goob joog ka ahaa Wasiiru Dowlada Wasaarada arimaha debeda ee soomaaliya.
Sidoo kale Danjire Xasan bin Xamsa Asad Haashim ayaa waxa uu Wasiirka arimaha dibada iyo ishkaashiga caalamiga ah ee Soomaaaliya ku wareeejiyey Gaari nooca aan xabadu karin ah,waxa uuna sheegay inay tahay hadiyad ka timid Shacabka iyo Xuumada dalka Qatar,ayna ugu deeqeen walaalahooda Soomaaliya.
Tan iyo wixii ka danbeeyey Markii Dowladaha Khaliijka ay xiriirka u jareen Qatar waxaa sii xoogaysanaayey xiriirka dhow ee ay la samaynayso Dalka Soomaaliya, waxa ayna xiriir qota dheer la samaysey Dowlada hada ka jirta Soomaaliya oo uu hogaamiyo Mohamed Abdullahi Farmaajo.